1. Kedu ihe bụ Bromantane?
3. Ntuzi ezi uche nke Bromantane
5. Bromantane utịp
6. Bromantane Nyocha ndị ọrụ
7. Bromantane isi iyi online
Bromantane (87913-26-6) bụ nke a maara na mbụ dị ka Ladasten ma ọ bụ ihe sitere na adamantine. Emepụtara ya na laboratories na ụlọ ọrụ ọgwụ na Russia n'oge 1980s. Ihe na-akpali akpali bụ na nchọpụta emere na ngwọta mmanụ ala bụ isi mmalite nke nchọpụta adamantane. Ọ bụ mgbe ahụ ka ndị na-eme nchọpụta malitere ịgbalịsi ike nyocha na ogige polyhedral na otu esi arụkọ ọrụ.
N'oge ahụ, ndị ọkà mmụta sayensị na-achọ ọgwụ ọgwụ nje na-enyere aka n'ịgwọ ọrịa influenza na site n'ọtụtụ ule na ọmụmụ ihe, ha chọpụtara na nkwonkwo nkwonkwo na nkwonkwo dopamine nwere ike inye aka na-akpali akpali. A hụrụ nchọpụta ahụ dị ka ihe nrịanrịa nke ahụike n'ihi na a pụrụ iji ihe ahụ mee ihe na ụfọdụ ngwa ngwa.
Bromantane aghọwo ihe a ma ama n'etiti ọtụtụ ndị ọrụ nootropic kemgbe ọtụtụ afọ na ọtụtụ ndị agha na ndị egwuregwu na-eji ya kemgbe afọ 80. Bromantane na-arụ ọrụ na-akpali akpali ma na-echegbu onwe ya n'otu oge ahụ. Ọ bụ ezie na mmetụta abụọ ahụ yiri ka ha na-agbanwe mmetụta nke ibe ha, ị kwesịrị iburu n'uche na Bromantane bụ ezigbo nootropic n'ihi na ọ bụ onye na-eche echiche na-akpali akpali ma na-akpali akpali na otu.
Ejiri ya mee ka mgbake dịkwuo ike mgbe emechara ahụ ike. Ọ ka dị na usoro nyocha iji chọpụta ma enwere ike iji ya na ọgwụ egwuregwu n'ihi na ọtụtụ ndị jiri ya n'oge gara aga ekwuola na ọ meela ka arụmọrụ egwuregwu ha bawanye. A na-ekwukwa na ọ na-eme ka mmadụ mụ anya yana ihe na-akpali ya na ike iche echiche ya.
Na 1996, A machibidoro Bromantane iwu mgbe a chọpụtara na ụfọdụ ndị egwuregwu na-eji ya ka ha wee pụta ma merie ndị ọzọ n'egwuregwu Olympic.
Usoro Bromantane nke eme ihe dabere na usoro serotonergic na dopaminergic neurotransmitter. Site ugbu a ị nwere ike ịkọ otú ọ na-arụ ọrụ. Mmetụta ya na-eme ka ọ pụta ìhè na Bromantane na-egbochi reuptake abụọ dopamine na serotonin. Ọ bụ ezie na a ka amabeghị otú o si eme ka norepinephrine na ahụ dị n'ahụ, ọ na-enyo enyo ime ya. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị na - echegbu onwe ha Bromantane na-arụ ọrụ sitere na otu o si ewusi nkwenye GABA-ergic.
N'ihi ya, Bromantane nwere ihe pụrụ iche tụnyere ndị ọzọ nootropics na ahịa. Site na usoro Bromantane nke ime ihe, o nwere ike ime ka mmetuta nke oghere dị ala nke usoro nhụjuanya nke etiti ahụ dị elu karịa hippocampus na hypothalamus nuclei.
Ozugbo enwere mmụm amino acid decarboxylase na tyrosine hydroxylase, e nwekwuru usoro dopamine site na tyrosine. Ntuba nke oma n'ime ụbụrụ pụtara na enwere ọganihu na ịmụrụ anya.
Sitekwa na ụba nke serotonin na ahụ, ị ​​ga-achọpụta na enwere obi ụtọ.
Ọ na-emekarị, ọ na-agbaji n'ime imeju ya, ọ na-ewepụkwa ya. Ebe ọ bụ na ọ na-egbochi ozu ahụ na-ekpo oke ọkụ, ọ na-enyere aka n'ịmaliteghachi ahụ mgbe ị gbalịsịrị. N'ikpeazụ, ọ na-eme ka usoro mmega ahụ gị dịkwuo mma ma mee ka ị kwụsị nrụgide.
3.Ntuzi ezi uche nke Bromantane
Ọ na-adị mma mgbe nile maka usoro Bromantane ziri ezi n'ihi na dị ka ihe ndị ọzọ na-eri na-abịa na mmetụta ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị kpebie iji oke dị elu ka i wee nwee ike ịmụrụ anya, ị nwere ike ịkwụsị inwe ụra. Ọbụna na ụfọdụ enwere mgbapụta nwere ike iduga onye na-ata ahụhụ site na mmetụta dị egwu nke nwere ike ịkwụsị na-emetụta ụbọchị gị n'ụbọchị. N'aka nke ọzọ, doses dị ala, agaghị enye gị ihe ịchọrọ, ma ị nwere ike kwụsị iche na Bromantane (87913-26-6) anaghị arụ ọrụ maka gị. Iji gbochie gị ịgafe ebe a bụ ndụmọdụ ụfọdụ maka gị; Ihe niile ị ghaghị ịma tupu ịzụta SARM
Ihe ọzọ ị kwesịrị ịmara bụ na Bromantane na-ejide onwe ya n'ihi na ọ na-etinye ngwa ngwa na ndị ọrụ nwanyi. Na Bromantane ọkara ndụ dị mkpụmkpụ karịa ụmụ nwanyị ma e jiri ya tụnyere ụmụ nwoke. Femụ nwanyị na-ewe ihe dị ka awa 2.75 ịmalite ịmalite mmetụta nke Bromantane ebe ọ na-ewe ụmụ nwoke awa anọ ka ha nwee mmetụta otu mmetụta ahụ. Ebe ọ bụ na ọ bụ lipophilic dị ukwuu, eriri afọ a na-etinye uche ngwa ngwa ngwa ngwa ọnụ.
Mgbe anyị na-ekwu okwu banyere ịkwado, anyị na-ekwu maka ịmekọ ihe mgbakwunye dị iche iche iji rụpụta nsonaazụ dị mma. Ihe nchịkọta ihe nchịkọta ọtụtụ nwere nzube dị iche iche iji mezuo ha niile n'oge oge nkwụsị. Uru nke na-abịa Bromantane bụ na ọ dị nnọọ mma na ọ nwere ike ma ọ bụ naanị ya ma ọ bụ na ya na mgbakwunye ndị ọzọ. Nke a bụ ụfọdụ n'ime ihe Bromantane na-emekarị na uru bara uru ha na-enye.
Bromantane, Agmatine, Kava Kava, AcetylCarnitine na Fish Oilnchịkọta
Nke a bụ otu n'ime Bromantane kachasị ike nke na-eme ka ahụ ike, mkpali, mkpali ma n'otu oge ahụ belata nchekasị.
Bromantane, Citalopram, Clomipramine, Liothyronine, na stack Agomelatine
Nchịkọta a dịkwa ike n'ịhụ na ọ na-enye gị ntị na nlọ anya na ịchọrọ.
(1) Uru Bromantane
Ndị na-eji Bromantane kweta na ọ na-enyere ha aka inweta ume mgbe ha na-eme ihe omume ha. Iji maa atụ, ebe dị anya nke siri ike ka ọ dị mfe ugbu a. Ọ bụghị naanị na ọ na-abara ndị na-agba ọsọ mara mma ma onye ọ bụla nke na-emega ahụ. Ga-amata na iji ihe Mgbakwunye Bromantane, ị nwere ike ime ugbu a ọtụtụ ume na ike maka ogologo oge. N'ihi nke a, ị ga-enwe mgbagwoju anya maka ókè ị ga-enwe ike imeri n'enweghị ike gwụchara gị. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịbịakarị ntachi obi gị dị elu karị, ịhazi Bromantane si Phcoker.com kwesịrị ịbụ ihe ọzọ ị ga - eme.
N'otu oge na ndụ, onye ọ bụla enwee nchegbu. Obi na-atụ egwu ma ọ bụ nchegbu nwere ike ịdị obere ma ọ bụ mgbe nile na-emetụta ndụ onye na-adịghị mma. Iji zere ịgabiga ụdị nsogbu ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ were Bromantane.
You maara mmetụta ị na-enweta mgbe ị na-esi ọrụ na mkpa ịga mgbatị mgbatị gị. O yikarịrị ka ike gị dị ntakịrị na ntakịrị ibuli ụkwụ gị nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ. Ọ bụghị naanị ike ọgwụgwụ na-emetụta etu anyị si eme ihe omume anyị mana ọ na-emetụtakwa mmekọrịta mmekọrịta gị, ndụ ezinụlọ yana otu ị si eme omume na ọrụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị nwere ike amaghị ka esi emeso ya, ị Bụ Bromantane bụ otu n'ime ụzọ dị irè iji kwụsị ike ọgwụgwụ. Ọ bụrụ n ’ọ dị gị ka ịchọrọ ike ume ga-eme ka ị nọrọ ụbọchị dum ma werezie mgbakwunye Bromantane bụ ihe kachasị mma ịme. Bromantane na-enyekwu gị ike n’emebighị ihe na - akpali gị ọbụlagodi mgbe ọ dị gị ka ike gwụrụ gị ma umengwụ na - achụ gị.
Kedu onye na-agaghị achọ ịnweta ezigbo usoro ọgwụgwọ? Inwe usoro mgbochi na-enye aka enyere ahụ gị aka ịzaghachi ọrịa na ụzọ kachasị mma. Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na site na nchịkọta mbụ nke Bromantane nke ị na-ewere, ahụ gị nwere ike ịlụso ọrịa ọgụ n'ụzọ dị mma karịa ka ọ nwere ike ịmalite. Mgbochi ahụ dị mma bụ n'ihi mmụba nke mkpụrụ ndụ B na ahụ. Ha bụ mkpụrụ ndụ ọbara ọcha na-enyere ahụ aka n'ịlụso ọrịa ọgụ. Nke ahụ pụtara na na eji Bromantane, ị ga-enwekwu nchedo pụọ na ọrịa na ọrịa. Bromantane na-enye anyị iwu taa ma na-eleta nleta nleta ugboro ugboro!
Ị nọ n'ọnọdụ nke na ị gaghị echeta ihe mere n'oge gara aga? O nwere ike na-enye nsogbu, ị ga-ahụkwa onwe gị ụdị usoro ọgwụgwọ nwere ike imeziwanye nke a. Ozi ọma ahụ bụ na Bromantane na-enyere aka na nchekwa nchekwa na nchọtaghachi ebe nchekwa. Ihe nke a bụ na ị nwere ike icheta ihe niile ị chọrọ. Ọ na-eme nke ọma n'ụzọ dị mkpirikpi ma okwu mkpirikpi ma ogologo oge na-echekwa ikike ị nwere icheta.
Ebe ọ bụ na imeju bụ akụkụ dị mkpa nke ahụ, ọ dị mkpa ka a lekọta ya. Ọ na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịchụpụ ihe na-adịghị mma na toxins ma kwadokwa mgbaze ahụ ike site na ịmepụta bile. Mgbe ufodu, o nwere ike ijide ya ma detoxing ya bu ihe kacha mma nke nwere ike ijide n'aka na o ka na aru oru. Bromantane egosila na ọ na-emebi umeji nke mere na ọ na-arụ ọrụ n'ọnọdụ ya kachasị mma. Imeju ọcha na-esitekwa na ụfọdụ uru gụnyere ọnwụ ọnwụ, na-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dị mma ma na-emeziwanye ahụike mmadụ. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe maka Bromantane kachasị mma nwere ike ịbụ mmalite dị mma maka gị.
Mee ka ahụ ike dịkwuo elu
Ndị na-ahụike na onye ọ bụla ọzọ kwesịrị ịtụ anya inweta ike ike n'ihi na ọ dị mkpa maka ahụike dị mma. Ọbụna karịa mgbe ị nwere ume ike, i nwere ike ibuli ihe dị arọ, mepee ọnụ ụzọ dị oke mkpa n'emeghị ka ike gwụ gị. Ọ na-ebelata ohere nke inwe mmerụ mgbe ị na-eme ihe omume gị kwa ụbọchị. Ma, olee otu ị ga - esi gbakwunye ike ike gị? Iwere Bromantane bụ otu ụzọ dị irè ga-enyere aka n'ịkwalite ike ike gị.
Na-enweghị ọgwụgwọ na-enweghị ihe mgbaàmà ọ bụla
Ihe nke a pụtara bụ na Bromantane anaghị eme ka ahụ gị dabere na kemịkal. Dabere na ọmụmụ emere, ozugbo ịkwụsị ya, ọ ga-efu gị ihe ọ bụla n'ihi na ị gaghị eri ya. N'adịghị ka ihe mgbakwunye ndị na-eme ka mmadụ na-eme ihe, onye a anaghị eri ahụ, ọ gaghị ebute ihe mgbaàmà ọ bụla mgbe ị kpebiri ịkwụsị ya.
Mgbe ị na-a supplementụ ihe mgbakwunye ma ọ bụ ọgwụ ọ bụla, ọ bụ ihe dị mma na ị nwere ihe ize ndụ nke ịta ahụhụ site na mmetụta ndị ọzọ. Ihe dị iche na-abịa n'ike nke mmetụta. Supfọdụ mgbakwunye nwere ike ime ka ị na-ata ahụhụ sitere na oke mmetụta dị egwu nke nwere ike mechaa metụta ndụ gị, ya bụ, kansa, ọrịa strok, nkụchi obi ma ọ bụ ịmịnye akụkụ akụkụ ebe ndị ọzọ nwere ike ịdị nwayọọ. Maka Bromatane, ọ ga-enye gị uru niile na-etinyeghị ahụike gị n'ihe egwu. Ya mere, ị ga-enwe ike ijikwa mmetụta ndị ahụ nke ọma ma ọ nweghị oge ọ bụla ha ga-emetụta ọrụ gị kwa ụbọchị.
O nwere ike inye aka na mmeputakwa
Enweela ọmụmụ banyere ụmụ oke ụmụ nwoke, ha gosipụtara na Bromantane na-amụba ọnụ ọgụgụ ha ma na-eme ka ọkpụkpụ sperm ahụ kwaa. N'ime ụmụ oke ụmụ nwanyị, o nyeere aka igbochi nsị embrayo. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-eme ka ụmụ nwoke na-enwe mmekọahụ na mkpịsị ụkwụ nke ọrụ dopamine nke mmezi a.
Anyị nwere ike ịdabere n'ọmụmụ ihe a ebe ọ bụ na ụmụ mmadụ nwere ụdị mkpụrụ ndụ yiri nke ahụ dị ka ụrọ. Na ọtụtụ ndị na-ata ahụhụ site na mmepụta nwa oge n'oge a, Bromantane nwere ike ịghọ ihe mmeri ha.
Bromantane nwere ike inyere aka na ọgwụgwọ Neurasthenia
Neurasthenia bụ ọnọdụ na-eme ka mmadụ na-arịa ụra nke ọma, ike ọgwụgwụ uche na ike ọgwụgwụ. N'ime nnyocha e mere na ndị ọrịa asthenia, na-ewetu ala Bromantane onunu ogwu belata ihe mgbaàmà ma nyere ha aka ihi ụra. O mekwara ka ndụ ha dịkwuo mma, naanị 3% nke ndị ọrịa nwere mmetụta dị nro dị mma.
Bromantane na-eme ka o doo anya na ọ bụrụ na ị na-enwe ụra, ọ na-eme ka ị mụrụ anya mgbe ọ na-eme ka ị mara mgbe ị na-eteta.
Ọ nwere ike belata nsị
N'ime nnyocha a na-eme ụmụ oke, Bromantane mere ka ịda mbà n'obi belata-kpatara mbufụt. Ọ rụpụtara nke a site na ibelata ogo nke cytokines ndị a na-afụ ụfụ;
(2) Bromantane ize ndụ
Na mgbakwunye ọ bụla ị na-ekpebi iji, ị na-agba ọsọ na ịnweta ahụhụ site na mmeghachi omume na ịnweta uru. Ihe dị mkpa bụ na ị ghaghị ịtụle ihe ize ndụ ndị nwere ike ịnweta mmetụta dị mma tupu ị na-ekpebi ma ị ga-eji mgbakwunye. N'ọnọdụ anyị, ọganihu Bromantane yiri ka ọ na-emetụta ihe ize ndụ. Ihe ka ọtụtụ n'ime mmetụta Bromantane dị mma na mmadụ ole na ole na-ata ahụhụ na nsogbu Bromantane. Ihe nwere ike ime ka mmetụta nke mmetụta ndị ọzọ dị njọ na-eburu Bromantane dị elu. Ọ bụrụ na ị na-eji usoro osụhọde ala, ị ga-enwe ike ibelata ihe ize ndụ nke ịta ahụhụ site na mmetụta dị egwu. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime mmetụta Bromantane nke nwere ike kpatara ya.
A na-enyo enyo dị elu nke Bromantane na ọ ga - eme ka mmụba dị na ntinye DNA nke njikọ beta-amyloid precursor nke jikọtara ya na pathogenesis nke ọrịa Alzheimer. Ọ dị mma ịmara na a na-eme nchọpụta a na ihe dị ka iri isii na asatọ ugboro asatọ karịa ụbụrụ dị n'usoro.
Ozugbo i jiri Bromantane ruo ogologo oge, ị nwere ike ịta ahụhụ site na ụbụrụ isi ma ọ bụ isi ọwụwa karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji ihe karịrị 200mg ya. Ụfọdụ ndị na-ekwupụtakwa na ọ dị ha ka ha na-enwu gbaa mgbe ha na-ewere kwa ụbọchị.
O nwere ike ime ka ndị mmadụ ghara iwe iwe. Nke a nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà site n'inwe obi iru ala na afo, ya bụ, ihe mgbu, ọgbụgbọ, wdg. Iji gbochie nke ahụ, ịnwere ike ịtụle ịṅụ ọgwụ ọjọọ.
Bromantane anọwo na-arụ ọrụ maka afọ ole na ole, ọ bụrụ na ndị ọrụ nyocha ga-agafe, mgbe ahụ, mgbakwunye a bụ ọrụ dị egwu. Ndị mmadụ na-emeghachi omume n'ụzọ dịgasị iche iche na mgbakwunye dị iche iche, ma nke a na-adabere na akara niile. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile Bromantane na-atụle bụ ọtụtụ mmadụ nwere oge dị mma mgbe ha nụsịrị ya na mgbanwe ọ gbanwere na ndụ ha. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime nyocha Bromantane anyị nwetara site na ndị ahịa nke tụkwasịrị anyị obi dị ka isi Bromantane ha.
Gongfu na-ekwu, sị, "M malitere ịmụrụ Bromantane n'izu ole na ole gara aga, ihe niile m nwere ike ikwu bụ na m na-amasị ya! Nke mbụ, ọ na-eji obi ụtọ mee ka m nwee obi ike na mkpali. Eche m dị elu, m na-atụkwa anya ịmalite ụbọchị ọhụrụ. Ọ na-adị m ka ọ dị ọhụrụ ma ọ bụghị naanị na ọ na-eme ka ndụ m nwekwuo obi ụtọ kama ọ mewokwa ka m nweta ọtụtụ ihe n'oge gara aga. Ugbu a, enwere m ike ịkọrọ ndị ahịa m nkwenye karịa ike m, ma achọpụtara m na m na-eme ka ndị ahịa karịa ahịa m mere n'afọ gara aga. N'ịbụ onye na-ese ihe, enwere m ike ịrụ ọrụ m karịa ike na ume, ọ dịkwa m ka mmeju a ga-anọgide na-eme ka ọrụ m dịkwuo elu. Na Ahụmahụ Bromantane dị ezigbo mma, m ga-akwado mgbakwunye a maka onye ọ bụla chọrọ ịgbanwe ndụ ha. " Ihe Nkọwa 6 na Melanotan-II / MT2 nke ị chọrọ ịma
Huang na-ekwu, sị, "Ọrụ m gụnyere ime ọtụtụ akụkọ, n'oge na-adịbeghị anya amalitere m inwe ụbụrụ ụbụrụ. Enwere m ike ileghara anya ma lekwasị anya, oge ezumike wee ghọọ ezigbo nsogbu. M na-enwe nsogbu mgbe niile na ndị okenye m ma mee ka ọ dị njọ na m nwetara akwụkwọ ozi ịdọ aka ná ntị. Enwere m mmetụta na-enweghị enyemaka ma kpebie google ma hụ ma enwere m ike inweta enyemaka ọ bụla. O di nwute, ejiri m gaa na Bromantane mgbakwunye site na phcoker.com, enyekwara m ha aka n'ihi nyocha ndị gosiri na ha bụ otu n'ime ndị kacha mma Bromantane ozuzu n'ụwa nile. Ezigbo ya, enweghi m nsogbu ọ bụla itinye uche ma ọ bụ ilekwasị anya. Ọbụna mgbe m rụsịrị ọrụ ruo oge, onye isi m na-aja m mma mgbe nile. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ m furu efu, ma enwere m ọganihu maka Bromantane. "
Ling kwuru, sị, ”Ọ dịla anya m chetara ihe m na-agaghị echefu echefu. Oge ụfọdụ anaghịdị m echeta ụbọchị ọ bụ n’izu. Ọ bụ ihe na-enye nsogbu n'ihi na anaghị m echefu ihe m ozugbo m chefuru ebe m debere ha. Nke ka njọ bụ na ọnọdụ a mere ka m hapụ mahadum n'ihi na m nọ na-ada n'ule m n'agbanyeghị na m gụsịrị akwụkwọ ike. Ọbụghị ruo mgbe enyi m tụụrụ m aro ka m jiri Bromantane wee kpebie ịnwale ya. O meela otu ọnwa, m echeta ihe. M na-echeta ọtụtụ n’ime ihe ndị dị mkpa m kwesịrị iche, ugbu a ọ dị m ka m bụ dimkpa. Ndị enyi m agaghịzi na-echetara m ihe ndị doro anya. Ihe na-eme m obi uto bu na alaghachila m ulo akwukwo ma rue ugbua emeela nke oma na nwamba m. Ọ bụrụ n ’ọ dị gị ka icheta ihe na - emebiri gị ihe, nke a bụ azịza ya. Yabụ kedu ihe ị ga-eche? Nye Bromantane iwu ka o si Phcoker nweta enyemaka ị chọrọ. ”
Wang na-ekwu, sị, "Bromantane enyerela m aka ịda mbà n'obi, anaghị m eji ọgwụ ọ bụla ọzọ. Ndị ezinụlọ m na ndị enyi m nọ na-enye m nsogbu n'ihi na mgbe ụfọdụ, enwere m ike inwe mwute na-enweghị atụ, m ga-emesị ghọọ onye na-egbu onwe m. M nwara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọgwụ niile i nwere ike iche, ọ dịkwa m ka m nwụọ. Ana m echeta ụbọchị ahụ mgbe onye ndụmọdụ m kwuru ihe jikọrọ Bromantane, anaghị m ewepụ ya. Iji mee mkpirikpi mkpirikpi okwu, mmekọrịta m na-arụ ọrụ na isoro ndị enyi na-akpakọrịta dịwanye mma. Ahụmahụ m Bromantane dị egwu, m ga-akwado ya onye ọ bụla na-alụso ịda mbà n'obi ọgụ. "
Juan na-ekwu, “A sị na m maara banyere ọgwụ a ọtụtụ afọ gara aga n'ihi na agaraghị m ata ahụhụ dịka m tara. Ike na-agwụkarị m mgbe abalị malitere ịmalite n’ihi na amaara m na II ga-adọga ịda ma hie ụra abalị ahụ niile. Mgbe ụfọdụ, ụjọ na-ejide m, m wee bee ákwá abalị dum. Ọbụna mgbe ọtụtụ nleta ụlọ ọgwụ gasịrị, ọ dịghị ihe gbanwere. Nwanne m nwanyị wetara m Bromantane, ana m a 100ụ XNUMXmg kwa ụbọchị maka ọnwa gara aga. Agaghị m ekele Bromantane n'ihi na kemgbe ahụ ehighị ụra na nchekasị belatara nke ukwuu, ana m ehi ụra ugbu a na-enweghị nsogbu ọ bụla. Obi na-eru m ala ugbu a, abalị atọbeghịkwa m ụtọ
Hui na-ekwu, “Abụ m onye na - arụ ọrụ ahụ, ebe ọ bụ na amalitere m iji ngwaahịa a, achọpụtara m ọtụtụ uru ọ bara ọkachasị na ike ahụ. Enwere m ike ibuli ibu dị arọ karịa n'ike agbanyeghị emerụ onwe m ahụ. Mkpụrụ ahụ na-ebuwanye ibu kwa ụbọchị, onye ọ bụla na-elekwa ahụ m dọwara adọwa. M ga-etinye iwu m n'oge na-adịghị anya ma jụọ onye ọ bụla na-arụ ụlọ nke na-ele anya na ọ ga-adị mma ịzụta Bromantane. "
Cheng na-ekwu, "Ya mere, n'ụbọchị nke ọzọ, m kpebiri ịzụ ahịa maka ezigbo ndị ahịa Bromantane online. Enwere m ụfọdụ n'ime ha, achọkwara m ịbanye na nke kacha mma. M na-erubere atọ n'ime ha ma kpebie inye ha ule. Agwara m ha ma jụọ ha banyere nhọrọ ha ga-enye. Ghọta ihe mere? Naanị otu saịtị ahụ ezipụghị azịza ya. Phcoker.com zitere m azịza zuru ezu nke mere ka m maa jijiji. Ndị nlekọta ahịa ha bụ ihe kachasị elu, enwekwara m obi iru ala na-etinye ha n'usoro iwu. N'ime ụbọchị ole na ole, e nyere m iwu m, m ga-agwa gị banyere nsonaazụ n'ime otu ọnwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta n'aka ndị na-ere ákwà na-eji ndị ahịa ha akpọrọ ihe, nke a bụ ebe ọ ga-abụ. "
7.Bromantane isi iyi online
Site na nyocha Bromantane nke ị gụrụ, ị nwere ike ịmasị ịzụrụ ya. Ma olee otu esi azụ ya? Ọ bụ ezie na ị nwere ike ijide n'aka ma ị ga-ahụ Bromantane n'ụlọ ahịa dị na mpaghara gị, ịzụta ya n'ịntanetị nwere ike inyere gị ezigbo aka. Luckily with the internet, ị nwere ike iji tụnyere ahịa, reviews na iji maka Mmeju na-ahapụghị nkasi obi nke ụlọ gị.
Ihe ị kwesịrị ịma tupu ịzụta ịntanetị bụ na saịtị niile adịghị echebe. Ịkwesịrị ịkpacha anya, ma ọ bụ ị nwere ike itinye ahụ ike gị n'ihe ize ndụ. Nke ka njọ bụ na ị ga-egbusi ego gị na oge site na ịzụta. Ihe kpatara ya bụ na ị nwere ike zụrụ Bromantane nke ahụ bụ ego adịgboroja ma jiri ya rụọ ọrụ, ị ga - ejide n’aka na ị gaghị enweta ihe ọ bụla. Ngwaahịa ndị ọzọ nwere ike kubie ume, nke a na-ebelata arụmọrụ ha. Mgbe ụfọdụ, ndị na-eweta ngwa ahịa Bromantane adịgboroja nwere ike chọọ igwu ndị mmadụ wayo site na ịrekwa mgbakwunye ndị elefuru anya site na iji eziokwu ahụ bụ na a na-eme azụmahịa na ịntanetị.
Ị nwekwara ike chọpụta na ị zụtara otu mmezi nke ezuola ohi ma gbanwee. Dịka o nwere ike ịba uru, ị gaghị achọ ịkwalite saịtị na-eme nke ọma site na izu ohi n'aka ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ihe mgbakwunye nwere ike iyi ka ọ dị ọnụ ala, ọ dị gị mkpa ịdị uchu ịghara izere iji ya eme ihe.
Anyị achọghị ka ị na-ata ahụhụ site na ihe ndị a nile, ọ bụkwa ya mere anyị ji nye gị ndụmọdụ ka ị jiri naanị saịtị a tụkwasịrị obi na Phcoker.com. Anyị nwere ọtụtụ ihe mere ị ga-eji zụta n'aka anyị, anyị ga-enyekwa gị ụfọdụ n'ime ha.
Anyị bụ ndị ahịa a pụrụ ịdabere na ha ebe ị nwere ike ịzụta Bromantane, anyị ga-ebufe ya na ọnọdụ gị. Anyị na-ere Bromantane dị elu bụ nke na-enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla. N'ihi ya, nchekwa Bromantane abụghị ihe ị ga-achọ ichegbu onwe gị. Anyị na-arụ Bromantane site na steeti ọrụ, ọ ga-enye gị ihe ị ga-enweta n'oge kachasị anya. Ihe Ntuziaka 2019 Kachasị Egwu Na Gonadorelin Acetate
Maka ahịa anyị, anyị nwere ọnụ ahịa, ị gaghị agbanyekwu n'ime akpa gị ịzụta Bromantane. Anyị na-ejikwa n'aka na ị bara uru maka ego gị site n'ịhụ na ị bụ Bromantane dị irè n'ahịa kasị mma n'ụwa nile.
Anyị na-enye ahụmahụ ịzụ ahịa nke ndị ahịa iji hụ na onye ọ bụla na-azụ ya nwere ahụmahụ ịzụ ahịa n'efu. Ngụgụ ahịa nke ndị ahịa anyị na-abịa na mbụ, ọ bụkwa ihe mgbaru ọsọ anyị ịhụ ka ha niile nweta ihe kacha mma. Onye nlekọta ndị ahịa anyị dị njikere mgbe niile ịge ntamu gị, aro, na aro gị, nke a bụ ihe dị n'ógbè karịa ndị ọzọ na-asọmpi.
Nbunye anyị dị mma, ntụkwasị obi na ngwa ngwa. Ozugbo ị nyere Bromantane iwu n'aka anyị, anyị na-eziga ngwugwu gị n'oge kachasị dị mkpirikpi, yana oge ị nwetara, ọ dabere na ọnọdụ gị. Zụta Bromantane n'aka anyị taa ma bido njem gị iji nwee ahụike.
Chemical Abstracts, Volume 139, N'ihe 1, Nkebi 1, American Chemical Society., 2003, peeji nke 94
Oliynyk, S., $ Oh, S. (2012). Nkà ọgwụ nke ndị na-echebe ndị acro: Ntuziaka bara uru iji meziwanye arụmọrụ na uche. Biomolecules na Therapeutics, 20 (5), 446-556
Krapivin, S. V, Sergeeva-SA, $ Morozov, IS (1993), Nlekọta ịchọta ọgwụ-electroencephalographic nke bromantane, 116 (11), 515-8